त्रिभुवन आर्मी अन्नपूर्ण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकपको च्याम्पियन - BirtaJyoti
super userNovember 11, 2019 12:05 pm 0
झापा, कात्तिक २५ । विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब झापाको डोमालाल राजवंशी रंगशालामा आयोजित अन्नपूर्ण हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डकपको च्याम्पियन बनेको छ ।
सोमबार भएको फाइनल खेलमा स्पर्धी चर्च ब्वाइज युनाइटेडमाथि सहज जीत निकाल्दै आर्मी च्याम्पियन बनेको हो । चर्च ब्वाइजविरुद्ध २–० गोलको नतिजामा आर्मीलाई च्याम्पियन बनाउन कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकी नायक सावित भए । आर्मीका लागि पहिलो र दोस्रो हाफमा समान १–१ गोल भएको थियो । खेलको अन्त्यतिर दुवै टोली आक्रामक बन्दा कार्डको वर्षा भएको थियो । ८० मिनेटको निर्धारित खेलमा ७ वटा पहेँलो कार्ड देखाइएको थियो ।
५८ र ८३ मा दोहोरो पहेँलो कार्ड पाउँदै चर्च ब्वाइजका राजेन्द्र रावल मैदान छाड्न बाध्य भए । आर्मीका ३ जना खेलाडीले पहेँलो कार्ड पाएका थिए । खेलको ३२औँ मिनेट आर्मीका कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए । देब्रे साइडबाट टंक बस्नेतले मिलाइदिएको पासमा पेनाल्टी एरियामा अनमार्क रहेका उनले ग्रास सुट गर्दै गोल गरेका थिए ।
त्यस्तै, टेकबहादुर बुढाथोकीकै एक्लो प्रयासमा खेलको ८०औँ मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाए । चर्च ब्वाइजका गोलरक्षक विनय श्रेष्ठसँग वान भर्सेज वानमा बललाई दोस्रो बारतर्फ चिप गर्दै उनले गोलपोस्टको दिशा दिएका हुन् । यसअघि खेलको २५औँ मिनेटमा चर्च ब्वाइजका सुनिल खड्काले गोल गर्ने अवसर गुमाएका थिए । आर्मीका गोलरक्षक विवश चौधरीसँग वान भर्सेज वानमा सुनिलले प्रहार गरेको बल खेर गएको थियो ।
खेलको उत्कृष्ट गोलरक्षक आर्मीका गोलरक्षक विवश चौधरी घोषितहुँदा चर्च ब्वाइजका सुनिल खड्का उत्कृष्ट मिडफिल्डर घोषित भए । त्यस्तै, आर्मीका दिपक गुरुङ उत्कृष्ट रक्षक घोषित हुँदा आर्मीकै टंक बस्नेत गोल्डकपकै उत्कृष्ट फरवार्ड घोषित भए । फाइनल खेलको म्यान अफ दी म्याच चर्च ब्वाइजका अशोक खवास घोषितहुँदै पुरस्कृत भए । गोल्डकपकै उत्कृष्ट खेलाडी आर्मीका कप्तान टेकबहादुर बुढाथोकी घोषित भए । उनलाई झापा ११ एफसीका अध्यक्ष जलकुमार गुरुङले पुरस्कार प्रदान गरे । उत्कृष्ट प्रशिक्षकमा आर्मीकै नविन न्यौपाने घोषित भए ।
विजेता आर्मीले नगद १२ लाख ५० हजार तथा उपविजेता चर्च ब्वाइजले नगद ६ लाख २५ हजार पुरस्कार पाए । विजेता तथा उपविजेता टिमलाई १ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय शेरधन राईले नगद तथा ट्रफी प्रदान गरे । भारतका दुई टिमसहित १० वटा टिम सहभागी गोल्डकप बिर्तामोडको जायोन सपोर्टस् क्लबले आयोजना गरेको हो ।
कस्ले जित्ला झापा गोल्डकप ?
बिर्तामोड । नेपाल आइस पाँचौं झापा गोल्डकपको उपाधिका लागि आज घरेलु टिम झापा–११ र त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लब आमनेसामने हुँदैछन् । बिर्तामोड–३ स्थित डोमालाल राजवंशी ... Read More
NEWER POSTमेची नदीको झोलुंगे पुल अधुरो छाडेर ठेकेदार वेपत्ता, स्थानीय जोखिम मोलेर पुल तर्दै
OLDER POSTकसले चुम्ला पूर्वाञ्चल गोल्डकपको ट्रफी ?
लागुऔषधसहित काँकरभिट्टा नाकाबाट सात जना पक्राउ